အောင်ဒင် – ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! (၅) – MoeMaKa Burmese News & Media
(ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၄)
ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ !!!! (၅)
The Economist (March 1, 2014)
အပိုင်း (၅) ဘာသာပြန်သူ၏ မှတ်ချက်
၁၊ ဒီစာတမ်းရဲ့ အစပိုင်းမှာ “စည်းမျဉ်းတွေကို အခြေပြုတဲ့ ဒီမိုကရေစီ” (A Rules-Based Democracy) လို့ ရေးသားထားပါတယ်၊ အဲဒါ လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ် (Independent Judiciary) နဲ့ မျှတသောဥပဒေများရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု (Rule of Law) ကို အခြေခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဆိုလိုတာပါ၊ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ အမွေအနှစ်အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ “စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ” (Discipline Flourishing Democracy) ကို ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါ၊
၂၊ စာတမ်းရဲ့ ခေါင်းစဉ်က “ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်လိုမှားယွင်းနေသလဲ” ဆိုလို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဝေဘန်ပြစ်တင်တဲ့ စာတမ်းလို့ မထင်စေချင်ပါ၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်အောင်မြင်ရေးအတွက် လက်တွေ့ပြဿနာတွေကို ဝေဘန်သုံးသပ်ပြီး အကြံပြုတဲ့ စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်၊
၃၊ ဒီစာတမ်းမှာ အာရပ်နွေဦးနိုင်ငံများနဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံတွေက အဖြစ်အပျက်တွေကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတိပြုရန်အချက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်၊
၄၊ အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးက ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်ပါတယ်၊ လက်ရှိအစိုးရကို မကျေနပ်သူတွေက စုဝေးပြီး အစိုးရကို ဆန္ဒပြမှု စတင်တယ်၊ နာကျည်းနေတဲ့ ပြည်သူတွေ လက်တွဲပါဝင်လာကြတယ်၊ မြို့လယ်ခေါင်က အစိုးရဗဟိုအချက်အချာနေရာတွေကို ချီတက်ဆန္ဒပြကြတယ်၊ မြို့တော်အလယ်က ရင်ပြင်ကြီးတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ပြီး သပိတ်စခန်းဖွင့်တယ်၊ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး တရားတွေဟောကြတယ်၊ လူတွေလာရောက်နားထောင်ရင်း သပိတ်တပ်သားတွေ ဖြစ်လာကြတယ်၊ အစိုးရက သူ့ရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေကို နှိမ်နင်းတယ်၊ ဖြိုခွဲတယ်၊ ပြည်သူတွေ သေဆုံးကြတယ်၊ သွေးချောင်းစီးတယ်၊ ဒီအကြမ်းဘက်မှုတွေကို သတင်းဋ္ဌာနများက တဆင့် နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး အာဏာရှင်အစိုးရကို ပြစ်တင်ရှုံ့ချတယ်၊ ဆန္ဒပြသူတွေကို အားပေးတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အာဏာရှင်အစိုးရပြိုလဲပြီး အာဏာရှင်တွေ အဖမ်းခံကြရ၊ နိုင်ငံက ထွက်ပြေးကြရတယ်၊ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အာဏာရတယ်၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ကို ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက ဝိုင်းဝန်းကူညီ ထောက်ပံ့ကြတယ်၊ ပြည်သူတွေ အောင်ပွဲရတယ်၊
၅၊ အဖြစ်အပျက်တွေက ပြည်သူတွေ အောင်ပွဲရတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဆုံးသပ်ခဲ့ရင် ကောင်းမှာပါ၊ ဒါပေမည့် မျှော်လင့်သလို တကယ့်ဇာတ်သိမ်းက မကောင်းလှပါ၊ ပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သူ ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေ အာဏာရလာပေမည့် လူထုဆန္ဒပြပွဲများက မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေဟာ အာဏာရလာတဲ့အခါမှာ အရင်ကလူလိုပဲ အာဏာရှင်တွေ ဖြစ်နေပြန်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေမပြည့်ဝတာကို ပြည်သူလူထုခင်မျာ တအံ့တဩတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်၊ အစိုးရသစ်က အရည်အချင်းမပြည့်ဝတဲ့ အပြင် အရင်အာဏာရှင်အစိုးရက ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေက အင်မတန် ကြီးမားပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကလည်း အင်မတန်မြင့်မားလွန်းတော့ တိုင်းပြည်ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီး အရင်အာဏာရှင်ခေတ်က အခြေအနေမျိုးနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်၊ စီးပွါးရေးအကြပ်အတည်းကြီးတွေဖြစ်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပြိုကွဲမှုမြင့်မားနေချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို အသုံးချပြီး အရင်အာဏာရှင်တွေ အာဏာပြန်ရလာတာကို တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါ၊
၆၊ ဒါတွေဟာ စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးပြောတာမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေကနေ တွေ့မြင်ရတဲ့ ရလဒ်တွေပါ၊ “တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရတာ အစိုးရကို တော်လှန်ရတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုပြီးခက်ခဲတယ်” ဆိုတာ အာရပ်နွေဦးလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများရဲ့ လက်သုံးစကားဖြစ်နေပါပြီ၊
၇၊ ဒီမိုကရေစီကို အားနည်းစေသည့်အကြောင်းတစ်ချက်ကတော့ အစိုးရကို အာဏာအလွန်အကျွံပေးထားမှု (သို့မဟုတ်) အစိုးရက အာဏာအလွန်ချဲ့ထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ အစိုးရက အာဏာအလွန်အကျွံရှိလေ ပြည်သူလူထုမှာ အာဏာမဲ့လေဖြစ်ပါတယ်၊ အစိုးရရဲ့ အာဏာကြီးမားမှုက ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်၊ လွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်တော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမည့် ဟောပြောခွင့်တော့ တောင်းခံရမယ်၊ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်တော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမည့် အဖွဲ့အစည်းကို မှတ်ပုံတင်ရမယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတယ်၊ ဒါပေမည့် ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရင် ဖျက်သိမ်းခံရမယ်၊ ကိုယ့်အမေအိမ် တစ်ညသွားအိပ်တာတောင်မှ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမယ်၊ စသဖြင့် အစိုးရအာဏာကြီးမားမှုက အစိုးရကို ပြည်သူလူထုရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲကို စွက်ဖက်ချယ်လှယ်ခွင့်တွေရစေပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးရပါတယ်၊
၈၊ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်က ပြည်သူလူထုရဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခွင့်၊ စတဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ လွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌန်းတဲ့ ဥပဒေများနဲ့ အာမခံချက်မပေးတာပါ၊
၉၊ နောက်တစ်ကြောင်းက လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ် မရှိတာပါ၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်မှာ ကျင့်သုံးတဲ့ ဥပဒေတွေက အာဏာရှင်များရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေ၊ အများပြည်သူရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ တရားစီရင်စီရင်ရေးက အုပ်ချုပ်သူများရဲ့ ဩဇာသက်ရောက်မှုကို ခံယူနေရတယ်၊ ငွေကြေးချမ်းသာသူများဘက်က ရပ်တည်တယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီစနစ် မရှင်သန်နိုင်ပါ၊
၁၀၊ နိုင်ငံတော်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး တွေကြားမှာ အပြန်အလှန်စစ်ဆေးထိန်းကြောင်းမှုတွေ (Checks and Balances) အားနည်းရင်လည်း ဒီမိုကရေစီစနစ် အားနည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို တရားစီရင်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုအာဏာများက စစ်ဆေးထိန်းကြောင်းနိုင်ရပါမယ်၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုအာဏာများက စစ်ဆေးထိန်းကြောင်းနိုင်ရပါမယ်၊ ဥပဒေပြုအာဏာကို အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာများက စစ်ဆေးထိန်းကြောင်းနိုင်ရပါမယ်၊ အဲဒီလို အပြန်အလှန် စစ်ဆေးထိန်းကြောင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီ ထိခိုက်နစ်နာရပါတယ်၊
၁၁၊ နောက်တစ်ခုက လူများစုအသာစီးရမှုကြောင့် လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအများစုရလို့ အနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကို ဂရုမစိုက်ပဲ အစိုးရအာဏာကို ချဲ့ထွင်တာ (ဥပမာ သမ္မတသက်တမ်းကို တိုးချဲ့တာမျိုး)၊ အများစုနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ပြီး အနည်းစုကို ဖိနှိပ်တာ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရာထူးတွေမှာ ကိုယ့်ဘက်ကလူကိုပဲ ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာတွေ ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အနိုင်ရတဲ့ အများစုက မူဝါဒတွေအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပေမည့် လူနည်းစု အတိုက်အခံရဲ့ သဘောထားကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်၊ လူနည်းစုမှာလည်း သူတို့ရဲ့ သဘောထားကို ဖော်ထုတ်ခွင့်နဲ့ ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိဖို့ အာမခံရပါမယ်၊
၁၂၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဏာနဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ပြည်ပထောက်ပံ့ငွေ၊ ချေးငွေတွေကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီး အနာဂတ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတွေ မပြုဘူးဆိုရင်လည်း ဒီမိုကရေစီကို အားနည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း အစိုးရရဲ့ အခန်းကဏ္ဏကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချပြီး ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဏကို ပိုပြီးတိုးမြှင့်သင့်တာပါ၊ အစိုးရက ကြီးမားလေလေ၊ တာဝန်ယူရတာများလေလေဖြစ်ပြီး လူထုက အစိုးရအပေါ် မှီခိုရမှုပိုများလေလေ ဖြစ်ပါတယ်၊ လူထုရဲ့ လက်ရှိပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရေးနဲ့ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုတ်နှံရေးတို့ကို မျှမျှတတစီမံခန့်ခွဲမှုမပြုနိုင်တဲ့အခါ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ချို့ယွင်းပြီး လူထုရဲ့ မကျေနပ်မှုကို ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်သလို ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ၊ အဲဒါရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ဆင်းရဲတွင်းနက်မှုနဲ့ စီးပွါးပျက်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်၊
၁၃၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့လည်း ငွေရှင်ကြေးရှင်များနဲ့ အခွင့်အရေးမျှော်အုပ်စုများရဲ့ အလှူငွေများအပေါ် မှီခိုရမှု၊ အလှူငွေများဖြင့် ဩဇာသက်ရောက်မှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ ငွေရှင်ကြေးရှင်များဆီက အလှူငွေကို လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသုံးစွဲဖို့၊ ပါတီရုံးခန်းဆောက်လုပ်ရေးစတဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ လက်ခံရယူနေတာကို ရပ်သင့်ပါတယ်၊ ငွေရှင်ကြေးရှင်များ ဩဇာသက်ရောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ ရှင်သန်ရပ်တည်နေခြင်းဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အားနည်းစေပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ နိုင်ငံရေးပါတီများ လူတစ်ဦးချင်းဆီက လက်ခံနိုင်တဲ့ အလှူငွေပမာဏကို ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများက ထည့်ဝင်နိုင်တဲ့ အလှူငွေကိုလည်း ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့ သူတို့ပါတီရရှိတဲ့ အလှူငွေစာရင်းကိုလည်း ထည့်ဝင်သူအမည်၊ ထည့်ဝင်သည့် ငွေပမာဏအတိအကျဖြင့် အများပြည်သူသိအောင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသင့်ပါတယ်၊
#ဒီမိုကရေစီစနစ် အားကောင်းရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကြံပြုချက်များ
ဂျိမ်းမဲဒီဆင် (James Madison)၊ ဂျွန်စတူးဝတ်မီလ် (John Stuart Mill) စတဲ့ ခေတ်ပေါ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မူလတည်ထောင်သူများပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ဒီမိုကရေစီဟာ အင်မတန်အားကောင်းလှပေမည့် မပြည့်စုံသေးတဲ့ စနစ်တစ်ခု (A Powerful but Imperfect Mechanism) ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် လူတွေရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အစွမ်းကုန်အသုံးချနိုင်အောင်နဲ့ လူတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်တတ်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် ဂရုတစိုက်ပုံသွင်းတည်ဆောက်ရပါမယ်၊ ဒါ့အပြင် စက်ယန္တယားတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းသလို အမြဲမပြတ် ချောဆီထည့်ရမယ်၊ အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ အမြဲတမ်းရှိနေအောင် ဂရုစိုက်ရမယ်၊ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်လို့ အလုပ်ဖြစ်စေရပါမယ်၊
၁၄၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ရာမှာ ပုံမှန်ကျင်းပတဲ့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများလိုပဲ အများလက်ခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တစ်ခုတည်ရှိရေးဟာလည်း တန်းတူညီတူအရေးကြီးပါတယ်၊ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ပင်မအရင်းအမြစ်ဥပဒေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ အများပြည်သူ လက်ခံနိုင်တဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပါမှ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွါးကို အထောက်အကူပြုမှာပါ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ လူနည်းစုရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အာမခံပေးထားပါမှ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုတွေကို တားဆီးနိုင်မှာပါ၊
၁၅၊ အစိုးရရဲ့ အာဏာကို ကန့်သတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊ ကန့်သတ်တယ်ဆိုရာမှာ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က ကန့်သတ်ခြင်းနဲ့ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကန့်သတ်ခြင်းဆိုပြီး ရှိပါတယ်၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က ပြည်သူလူထုရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ တည်ဆဲဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အစိုးရက ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို မထိပါးအောင် တားမြစ်တဲ့ ဥပဒေများပြဋ္ဌန်းခြင်း၊ အစိုးရကို အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းကြီးများကို ပြည်သူလူထုအများစုထောက်ခံမှ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ပေးခြင်း စတဲ့နည်းတွေနဲ့ ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်၊
၁၆၊ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကန့်သတ်တာကတော့ အရေးကြီးတဲ့ မူဝါဒဆိုင်ရာ ကိစ္စအချို့ကို ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ကော်မရှင်များကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးပြီး ရေးဆွဲစေတာ၊ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စအချို့မှာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွေကျင်းပပြီး လူထုကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်စေတာတို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ (Technocrats) များကို မူဝါဒရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အာဏာအချို့၊ သာမာန်ပြည်သူများကို ဆုံးဖြတ်ခွင့်ချခြင်းဆိုင်ရာ အာဏာအချို့ ခွဲဝေပေးခြင်းဖြင့် အစိုးရရဲ့ အာဏာကို အကျိုးရှိရှိကန့်သတ်နိုင်သလို ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ ပြည်သူများရဲ့အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုကို ပိုပြီးရစေပါတယ်၊
၁၇၊ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌန်းတဲ့ ဥပဒေတိုင်းမှာ ဥပဒေစတင်အသက်ဝင်တဲ့နေ့က စလို့ (၁၀) နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရမည်ဆိုတဲ့ ကာလစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေ ထည့်သွင်းရေးဆွဲသင့်ပါတယ်၊ ဘယ်ဥပဒေမှ တစ်သက်လုံး မမှန်နိုင်ပါ၊ ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့ တည်ဆဲဥပဒေများ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊
၁၈၊ အခွင့်အရေးမျှော်အုပ်စုများရဲ့ အန္တရာယ်ကို ရှောင်နိုင်ဖို့ အစိုးရက တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဏကို လျှော့ချရမှာပါ၊ လူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ် ယုံကြည်မရှိတာကို တုန့်ပြန်ဖို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ကတိပေးတာတွေကို လျှော့ချရမှာပါ၊
၁၉၊ အင်တာနက်နဲ့ အခြား ခေတ်မီလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေက ကမ္ဘာကြီးကို မြေကြောရှုံ့လိုက်ပါပြီ၊ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းနဲ့ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းက လူတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဆုံတွေ့ပြီး သတင်းတွေ အပြန်အလှန်ဝေမျှ၊ အပြန်အလှန် ထောက်ခံမှုတွေ ပေးနိုင်ကြပါပြီ၊ အလားတူပါပဲ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေကို သုံးပြီး ပိုပြီးနီးနီးစပ်စပ်ထိတွေ့နိုင်ကြပါပြီ၊ အဲဒီလို ခေတ်မီနည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး အီလက်ထရောနစ်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတာကို မျှမျှတတ ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်၊
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လိုတရဆေးကြိမ်လုံး မဟုတ်ပါ၊ ဒီမိုကရေစီရှိရုံနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာတွေ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်ပါ၊ ဒီမိုကရေစီက ပြည်သူတွေကို တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်စားပြုအုပ်ချုပ်မည့် အစိုးရ၊ ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲမည့် အမတ်တွေကို ပုံမှန်ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကနေ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ပေးပါတယ်၊ အဲဒီ ခေါင်းဆောင်တွေ တာဝန်မကျေရင်၊ အရည်အချင်းမပြည့်ဝရင် ရွေးကောက်ပွဲက တဆင့် ဖြုတ်ချပြီး ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါတယ်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေတွေက နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မူဝါဒနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုပဲ အပြောင်းအလဲရှိရှိ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကို မထိပါး၊ မကန့်သတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ မျှတပြီး အားလုံးအမှန်တကယ်လိုက်နာနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်ရှိဖို့ လိုပါတယ်၊ ခိုင်ခန့်အားကောင်းတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဘက်မလိုက်ပွင့်လင်း သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်၊ ပြည်သူလူထုက အစိုးရကို အလွန်အကျွံမမှီခိုဖို့ လိုပါတယ်၊ အစိုးရကလည်း အလွန်အကျွံအာဏာမယူဖို့ လိုပါတယ်၊
ဒီမိုကရေစီဟာ နှစ်ဖက်သွားဓားလိုပဲ အသုံးမတတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိသလို သုံးတတ်ရင်လည်း ရန်အပေါင်းကို အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမည့် အင်မတန် တန်ဘိုးကြီးမားတဲ့ အရာမို့လို့ မြတ်မြတ်နိုးနိုး တန်ဘိုးထားဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ပိုင်ဆိုင်ကျင့်သုံးရတဲ့ စနစ်မဟုတ်ပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးက အတူတကွ လက်ခံကျင့်သုံးရတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ချို့ယွင်းချက်တွေ၊ မပြည့်စုံမှုတွေ ရှိနေတာတောင်မှ ဒီမိုကရေစီထက် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဝါဒမရှိဘူးလို့တောင် ပြောချင်ပါတယ်၊ ချို့ယွင်းချက်တွေ၊ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေဆိုတာလည်း စနစ်ရဲ့ ဖန်တီးမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသူများရဲ့ အတ္တ၊ လောဘ၊ အကျင့်ပျက်ချစားမှုများ နဲ့ အမှားအယွင်းများကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်ပါစေ၊ ဝေဝေဆာဆာရှင်သန်ပါစေ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်တန့်အောင်မြင်ပါစေ၊။
မတ်လ (၂၀)၊ ၂၀၁၄
← ဇင်လင်း – “ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး” နဲ့ “လေးပွင့်ဆိုင်ဒိုင်ယာလော့”
မောင်သာမန် – နည်းပြချုပ်(မန်နေဂျာ) နှစ်ဦးနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ →
ဇင်လင်း – တရုတ်နိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနဲ့ ညီပါရဲ့လား
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) သတင်းဆောင်းပါး
February 27, 2014 Aung Htet
သားဝင့်ကျော် – ရှယ်ယာဝယ်ဖို့ ဘယ်က စမလဲ (၃) ( Stock exchange)